Belize: Yepamutemo COVID-19 Yekushanya Kugadziridza
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Belize: Yepamutemo COVID-19 Yekushanya Kugadziridza
Belize Breaking Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Dai 8, 2020
Belize Mutungamiriri Rt. Hon. Dean Barrow
Belize Mutungamiriri Rt. Hon. Dean Barrow aburitsa chirevo chinotevera nhasi:
Ini ndoda kukupa iwe yekuvandudza pane mamiriro ekutamba maererano neyedu Covid-19 kutambura. Ndisati ndaita kudaro, zvakadaro, ndipeiwo mukana wekutaura zvandinoshuvira kuti ndiporese nekukurumidza Anoremekedzwa Said Musa, aimbova Mutungamiriri weBelize. Ini ndinonzwisisa kuti nezuro husiku akagamuchirwa muchipatara achitambura izvo zvakatsanangurwa senge sitiroko yakapfava. Ndine chokwadi chekuti ndinobatana nevamwe vese veBelizeans mukumushuwira kukurumidza uye kupedzisa kupora.
Zvino maererano nezvandinofunga mangwanani ano, ndichagadzira mharidzo yangu yekutanga mushure meiyo yakanaka Dr. Gough ichakupa muongororwo wezvedu zvekushandisa uye yedu yekuyedza nzira. Mushure meizvozvo, chokwadi, isu tese tinotora mibvunzo yemidhiya.
Zvino, sekuziva kwako, hapasati paine chitsva chakasimbiswa COVID-19 kesi uye Muvhuro uchave iwo makumi maviri nesereth zuva, tichasvika iwo makumi maviri nesereth chiratidzo chezuva, ichipa chinzvimbo ichi chekusava nezvakanaka zvinobata muvhiki rino. Kana zvikadaro, uye tikasvika padanho iro remazuva makumi maviri nemasere, tinogona kukuvimbisa kuzorodza kumwe kwemimwe mirawo yasara.
National Oversight Committee ichasangana semazuva ese neMuvhuro, ichiteverwa neKabin neChipiri. Vachakumbirwa izvozvi kuti vape kufamba kwakakura kwenzvimbo, kunyanya kuti vakwanise kushanya kwekushanya kwemumba. Iwo mahotera, sekuziva kwako, akatopihwa mvumo yekuvhurazve, asi ikozvino isu taizopa pachena kugona kwevaenzi vemuno mumahotera edu kuti vakwanise kunakidzwa nezvakanaka, kusanganisira dziva, kusanganisira kufamba mumahombekombe, uye kusanganisira kushambira mugungwa. Ehezve, izvo zvinodiwa nehukama hwevanhu zvicharamba zviripo kuitira kuti boka rishambire uye kufamba-famba kweboka, kana uchida, zvicharamba zvichirambidzwa.
Iyi yekushanya kwemumba inosundira zvinomutsa nyaya yekuvhura kwedu kune vekunze kushanya. Hatisi pachena kuti hatisati tasvika uye kufungidzira kwangu kwakanyanya, kufunga kwangu kwakanyanya, hakusi pamberi paChikunguru. Izvo, ndinoda kuziva, zvakare chinzvimbo cheCARICOM sezvakakurukurwa mumusangano chaiwo wemisoro yakaitika kutanga kwesvondo rino. Ini ndinoda kujekesa, zvakadaro, kuti handina kumbobvira ndati kuvhurwa kwemiganhu yedu kuchafanirwa kumirira mushonga. Ndiwo mamiriro edzimwe nyika, mubatsiri wedu Taiwan ari mumwe akadaro. Haisi nzvimbo yangu zvakadaro. Nepo pakupedzisira zvichitsamira kuNational Oversight Committee neKabineti, maonero angu ndeaya. Tinofanira kurangarira kuti hutachiona, mune dzimwe nyika, hune huwandu hwekufa hunosvika gumi nemaviri muzana. Tisati tavhurazve, isu saka tinofanirwa kutarisa maringe nehutachiona muNorth America yese uye neUS kunyanya. Mushure mezvose, iyo US ndiyo yedu hombe mushambadzi musika, inoitisa pamusoro pe12% yekushanya kwedu kuyerera. Chero bedzi mitengo yehutachiona muUS isina kukwirisa, isu tingangwarire. Zvakare, tinotarisira, kunyangwe zvisingaiti kumirira, kurapwa kunoshanda kune avo vanorwara zvakanyanya mushure mekubata hutachiona. Chii chechokwadi chingatibvumidze isu kukanganisa izvozvi zvipingaidzo zvandichangobva kutaura nezvazvo kuwanikwa kweinoshanda nekukurumidza bvunzo. Iyo yekupedzisira inoita kunge iri kuswedera padyo nepadyo, saka ini pachangu chikonzero chekunzwa kuti isu tingave zvakanaka kuenda nekukwanisika kutanga kwaJuly. Iko kugona kwekukurumidza test vashanyi pavanosvika kunofanirwa kuve yakavhurika sesame. Haisi kukundikana, asi isu zvakajeka, senguva dzose, tinofanirwa kushandira kuponesa hupenyu nekuchengetedza hupfumi. Bvunzo inokurumidza yaizotibvumidza kupinza vese vashanyi vanoyedza vasina kana kusvika. Ichokwadi chekuti mumwe kana vaviri vanogona zvakadaro kubatira hutachiona, mumaonero angu, njodzi inogamuchirwa. Saka ndiko kuedza kunovimbwa nekukasira uko kungave kwakanakisa kwekukwezva kwekushanya kuvhurwa.
Kunyangwe vasati vadzoka vashanyi, isu tinofanirwa kugadzirira kudzoka kwevaBelizeans avo vakadzingwa kunze kwenyika. Nekudaro, isu takatomisa kare zvirongwa zvekudzoserwa kwavo kumusha. Ivo, chokwadika, vanofanirwa kupinda mukati mekupatsanurwa. Tinoshuvira kutanga chirongwa chekudzorera vanhu venyika yedu kumashure nekukurumidza sezvazvinogona. Zvinenge zviri pachena pamberi pekutengesa kwakawanda kwekuyedza kunogutsa kunoyedza. Uye ndosaka tichizofanira kunyatsogadzirisa kuyerera kwevanodzoka kwedu nekuti isu tisingakwanise kubata kwega kwehuwandu hwehuwandu hwakawanda kana munhu wese akatsvaga kudzoka panguva imwe chete. Asi ini ndinotarisira kuti ruzivo rwekugadziriswa, kuri kushandisirwa kunyangwe izvozvi, kuchaziviswa nekukurumidza mushure memisangano yevhiki rinouya.
Iyo Yekusashanda KweRubatsiro Chirongwa ichienderera uye huwandu hwazvino hunoratidza kuti vanopfuura makumi mana emakumi mana vanhu ikozvino vabvumidzwa. Zvimwechetezvo, rubatsiro rwechikafu rwuri kuenderera uye misha 40,000, kana vanhu 23,913, vava kupihwa masevhisi. Kune rimwe divi, zvakadaro hapana kana dhora rimwe rasvika reizvo zvakavimbiswa neInternational Financial Institutions. Ivo vanoomerera, zvakadaro, kuti mari inozouya pakupedzisira. Chokwadi, iyo IDB inoti inotarisira kuendesa pakupera kwemwedzi iyo 91,052 mamirioni BZ yeHurumende yehutano. Panguva ino chokwadi takatoshandisa mamirioni 12 emadhora kutenga zvinhu zvekurwisa COVID-6.2.
Zvino, panguva ino ini ndoda, zvinosuwisa, kuti nditaure chimwe chinhu nezve kusagadzikana kuri pakati peHurumende nePSU. Mamwe mapato maviri haana kujekesa nzvimbo dzawo saka ndinofanira kutarisisa kunyanya paPSU. Pane kusagadzikana uku pakati pedu pamusoro pezvatinofunga zvekuti vakuru vehurumende vanofanirwa kurega kuwedzerwa kwegore rino remari 2020/2021. Zvakare, kuti vakuru vakuru veruzhinji vanofanirwa kubvuma kudzikiswa kweimwe yavo mvumo; uye pekupedzisira, kuti panofanirwa kuve nekunyimwa chikamu chemahara uye mvumo kune vese makontrakita maofficial kusanganisira, ehe, ivo vakuru vatungamiriri.
Aya matanho anokosha chose asi kutaura zvazviri haana kukwana. Heino chikonzero. Pfupiso yemufananidzo wezvino wezvemari unoratidzika seizvi. Kwemwedzi waApril 2020 kuunganidzwa kwemutero webhizinesi uye GST pamwe chete kwaingova 48% yezvakaunganidzwa muna Kubvumbi 2019. Uku kuderera kwaive kubva pamamiriyoni makumi mashanu nemashanu emadhora muna Kubvumbi 45.8 kusvika pamamiriyoni makumi maviri nemasere emadhora muna Kubvumbi 2019. Rangarira zvakare kuti iyi mitero inobhadharwa mumashure, sekutaura. Nekudaro, iyo yaApril 2020 kuunganidzwa inoenderana zvakanyanya kunaKurume 2020 bhizinesi zviitiko. Kurume kwaive, hongu, pamberi pekukiya. Iyo poindi iri, kuti uyu Chivabvu wemwedzi uno 2020 unganidzo ine chekuita naApril 2020 bhizinesi zviitiko, apo kukiya kwakange kwazara kushanda, ichaona yakatonyanya kudonha kudonha. Iyo fungidziro, muchokwadi, ndeyekuti kudonha kwaApril kusvika kumadhora mamirioni 21.8 kuchadonhedza kuenda kungori chete mamirioni 11.2 emadhora muna Chivabvu Zvino chifunga futi kuti Tsika neHurumende zvakadonha muna Kubvumbi 2020 kusvika pamamirioni makumi maviri emadhora. Uku kwaive kudonha kwemamirioni gumi emadhora muna Kubvumbi 10. Zvekare, iyo Tsika yemari yaive yakanyanya yezvinhu zvakarairwa pasati kukiyiwa. Iyo imwecheteyo pateni saka sepabhizinesi mutero uye GST, ichadzokororwa zvine chekuita nemari yeCustoms. Saizvozvo, kudzikiswa kwezvinhu zvakarairwa mushure mekutanga kwekuvharirwa mwedzi uno wapfuura, kuchaona kumwe kudonha muunganidzwa weCustoms muna Chivabvu 2020. Funga pakupedzisira kuti Hurumende yemari yemubhadharo pamwedzi ndeye 45 mamirioni emadhora. Izvi zvinoreva kuti mamirioni makumi mana nemaviri emamiriyoni akaunganidzwa kubva pamutero webhizinesi, GST neCustoms muna Kubvumbi yaisakwanisa kusangana nemamirioni makumi mana emadhora emadhora pamwedzi Nyaya haisati yaperera ipapo nekuti pane, chokwadika, zvimwe zveHurumende zvekushandisa mari. Izvi zvinosanganisira basa rechikwereti, zvinoshandiswa, zvinopihwa, mafuta, uye mari hombe; uye ivo vanosvika kune mamwe mamirioni makumi mashanu emadhora emadhora kuHurumende yeBelize kuburitswa pamwedzi kwemamiriyoni mazana mapfumbamwe emadhora. Asi, ndinodzokorora, isu takangounganidza mamirioni makumi mana nemakumi maviri nemadhora muna Kubvumbi uye tinotarisira kusapfuura mamirioni makumi matatu muna May. Ndiri kuyeuchidzwa nezva Mr. Mashoko anozivikanwa aMicawber munaDickens aDavid Copperfield. Zviri mune izvo mamiriro ekuti chikumbiro cheGoB, chinoda zvibairo zvidiki kubva kune izvo zvakabhadharwa muhomwe yeruzhinji, zvinofanirwa kuonekwa. Zvese zvatiri kukumbira ndezvekuti vakuru vehurumende nevadzidzisi vasiye zvinowedzera zvegore remari 2020/2021. Panyaya yevakuru vemadhipatimendi nevamwe vakuru vakuru veveruzhinji, ivo vasvika pamusoro pezviyero zvavo uye nekudaro havawane kuwedzera. Saizvozvowo, ivo vari kunzi vape hafu yemari yavo yevaraidzo. CEO ndezvekupira zvikamu zvishanu zvemahara avo uye chikamu chemari yavo. Uye mamwe ese maofficial contract vanosiya zvimwe gratuity uye zvimwe zvipo. Makurukota akakanganwira muhoro wemwedzi mumwe uye mazana masere emadhora pamwedzi. Nekudaro, iro rekuwedzera boka rekumisidzana riri, mumadhora mazwi, kubvunzwa huwandu hushoma pane hwese. Nekudaro, ivo veruzhinji Mahofisi, sevadzidzisi, vanofanirwa kupa mashoma kune ese Hurumende yeBelize vashandi. Iye zvino wakandinzwa ndichitaura pachena kuti ndichaita damndest yangu kuti ndisambobata mibairo yekuwedzera yevadzidzisi nevashandi veveruzhinji. Nekudaro, iko kune iko kuvimbiswa uye kune zviriko mhedzisiro chete minuscule inokumbira yekuwedzera uye, kune vakuru, zvimwe zvipo. Mumamiriro ezvinhu ini ndakanyadziswa zvachose nekusanyanyisa kweiyo kunyanya PSU. Makambani akazvimirira mabasa akaderedzwa nedenda. Kupfuura vanhu zviuru makumi masere vakafanirwa kunyorera ruyamuro rwekusashanda. Dambudziko revose vasina kana chikafu rinotyisa. Nekudaro, GOB yakamanikidzwa, kunyangwe pakatarisana nekudonha kwemari, kuti vanzwe kuchema kwavo uye kuburitsa rubatsiro kwavari. Iyo IDB ichangobva kusimbisa kuti kune ese ehupfumi ekushanya anoenda pasi rese Belize ndiyo yechitatu yakanyanya kurohwa. Asi pakati pekupararira kwenzanga nehupfumi, pamberi pevanhu vanopfuura zviuru makumi masere vasina mabasa uye, Hurumende yeBelize ichakamiririra kuchengetedza mihoro yakawanda yevakuru vehurumende. Izvo zvisinei, ivo vanoramba kuita kunyangwe kuzvipira kudiki kwatiri kukumbira. Ini ndinoti pasina kuchengetedza nzvimbo yavo haina kugamuchirwa. Vane tsika inodada yekubaira asi ivo vari kuzvidzikisira ikozvino nekusaziva kwavo. Wese munhu anofanira kutambura, mumwe nemumwe anofanira kuzvipira, asi kwete ivo. Hazvinzwisisike zvachose uye Hurumende haizove nayo. Patinoenda kuCentral Bank yeBelize kunokwereta mari hombe iyo inodikanwa kubhadhara vashandi veveruzhinji, isu kune imwe nhanho tinodzinga chikamu chakazvimirira. Asi vega voga havasi kunyunyuta. Nekudaro, kana iyo PSU ikaramba ichiramba kunyangwe mupiro wekuyera watiri kuda, ini handione kuti maonero eruzhinji evanhu anogona sei kuvatendera kuti vasapunyuke nazvo. Hurumende haivabvumidze kuti vatize nazvo. Zvatinoisa kwavari zvinozochengetedza 17 mamirioni emadhora zvese zvakataurwa. Uku ndiko kudonha mubhaketi kwakapihwa kuti tiri kutarisa kwakakura kudarika mazana mana emamiriyoni emadhora, chirwere-chakakonzera kudzokororwa kwemari kwemari kwegore rino remari. Iyo ingangoita hafu yeiyo inofungidzirwa mari yekuunganidza. Iyi mamiriro, ini ndinodzokorora, haigone kuverengerwa uye Hurumende yeBelize ichaita izvo zvatinofanira. Iyo PSU inotaura nezvekuenda kuCourt. Zvakanaka, ndichavayeuchidza kuti hapana dare rinogona kumanikidza Hurumende kubhadhara izvo zvaisina.
Regai ini, pamwe nerunyararo ipapo, titendeukire ikozvino kuzviziviso zviviri zviri pachena. Mhemberero dzeKuberekwa kweMambokadzi, dzakarongerwa 24 Chivabvu, dziri kukanzurwa. Pamusoro pekumusoro, tinotarisira, neMuvhuro, kuzogamuchira zvirevo zvekuvhurwa zvishoma nezvishoma kwemachechi edu nenzvimbo dzekunamatira.
Imwe nyaya yekupedzisira. Mubvunzo wakasimudzwa wekuti vashandirwi vanobata sei avo vashandi avo vakaiswa basa kwenguva yakati rebei yekukiya kwakanyanya asi mune dzimwe nguva vava kudzokera kubasa. Bazi rezveVashandi rinozivisa kuti rakamira rakagadzirira kuraira pane kesi nenyaya. Asi semutemo wakajairika, tinotarisira kuti basa ravo ribatwe serinoramba richienderera kuitira kuti vasasarudzira kodzero yavo pamudyandigere kana kubviswa kwekupedzisira.